Safiirka cusub ee Somalia u fadhin doona Itoobiya oo laga guddoomay waraaqihiisa aqoonsiga… – Hagaag.com
Safiirka cusub ee Somalia u fadhin doona Itoobiya oo laga guddoomay waraaqihiisa aqoonsiga…
Posted on 13 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalka Itoobiya Amb. Cali Shariif Axmed ayaa laga guddoomay nuqul ka mid ah Waraaqihiisa aqoonsiga, kaddib markii dowladda Soomaaliya ay magacawday bilo ka hor.
Amb. Cali Shariif ayaa nuqul ka mid ah waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Dr. Workneh Gebeyehu, oo shalay ku qaabilay Xafiiskiisa.
Waxaa lagu wadaa in dhowaan uu waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyo Madaxweynaha Itoobiya Dr. Mulatu Tshome oo safar ugu maqan dalka Turkiga.
Safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Itoobiya Amb. Maxamed Cali Nuur Xaaji ayaa ka mid noqday Safiiro dhowr ah oo xilka laga qaaday dhamaadkii sanadkii hore
Cali Shariif ayaa horay u ahaa Safiirka Soomaaliya ee Faransiiska, halkaasoo laga soo bedelay.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii June ee la soo dhaafay magacawday illaa saddex safiir, inkastoo aanay si rasmi ah u shaacin, waxaa safiirada la magacaabay ka mid ahaa Safiirka Soomaaliya u fadhiya Shiinaha Amb. Cawaale Cali Kulane oo aan weli laga guddoomin waraaqihiisa aqoonsiga, C/risaaq Faarax Cali oo loo magacaabay Safiirka Qatar oo isna dhowaan laga guddoomay waraaqihiisa aqoonsiga, C/risaaq ayaa horay u ahaa Safiirka Soomaaliya ee Cummaan.
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa dhowaan meel mariyay magacaabida dhowr Safiir oo aan weli lagu kala qorin dalalkooda, waxaana la hadal hayaa Safiirada cusub ee loo magacaabay dalalka Kenya iyo Sudan inay kala yihiin Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo C/risaaq Shoole, inkastoo aan iyana weli waraaqadahooda la soo aqbalin.